कतारको सबैभन्दा ठूलो दोहा बैंक नेपाल आउँदै, अरु कुन कुन बैंक नेपाल आउँदैछन्? :: BIZMANDU
कतारको सबैभन्दा ठूलो दोहा बैंक नेपाल आउँदै, अरु कुन कुन बैंक नेपाल आउँदैछन्?
प्रकाशित मिति: Apr 15, 2018 10:01 AM
काठमाडौं। वेलायतको दि बैंकर पत्रिकाले बेस्ट रिजनल कमर्सियल बैंकको अवार्ड दिएको कतारको दोहा बैंक नेपाल आउने भएको छ। नेपालमा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको बैंकले कर्मचारी छनौटसमेत सुरु गरिसकेको छ।
'अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका लागि हामीले कतारको सबैभन्दा ठूलो बाणिज्य बैंक दोहा बैंकलाई प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिइसकेका छौं' नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले बिजमाण्डूसँग भने, 'यसले नेपालका बैंकहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार विस्तारका लागि सहजीकरण हुन्छ।'
दोहा बैंकको प्रतिनिधि कार्यालयले नेपाली बैंकहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नलगायत अन्य होलसेल बैंकिङ कारोबार गर्न सहजीकरणको काम गर्ने छ। नेपालमा मस्रेक बैंकले गरेजस्तै काम दोहा बैंकले गर्ने छ।
'हामीले कार्यालय स्थापना र स्थायी कर्मचारी नियुक्त गरेर आउन भनेका छौं। उनीहरु प्रकृयामा छन्' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने, 'उनीहरु हाम्रो सर्त पुरा गरेर आएपछि अन्तिम स्वीकृति दिन्छौं।'
दोहा बैंकले नेपालमा खुद्रा बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैन। उसले यहाँ बैंकिङ सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिरय अनुभव बाँड्ने काम गर्छ। 'नेपाली बैंकले खोलेको एलसीलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्छ,' पौडेलले भने, 'नेपाली बैंकलाई खाडीका देशहरुले चिनेन् भने दोहा बैंकले त्यहाँ सहजीकरण गरिदिने गर्छ।'
प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने भएकाले उसलाई चुक्ता पूँजीको आवश्यकता पर्दैन। आफ्नो माउ कम्पनीको नीति नियम अनुसार नै उसले नेपालमा काम गर्छ।
बैंकले आफ्नो आवाशीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा नेपाली बैंकरहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छ। आधा दर्जन बैंकरसँग उसले कुरा गरिसकेको छ। 'सकभर नेपाली नै छान्ने प्रयास गरिरहेको छ' पौडेलले भने। मस्रेक बैंकको नेपाल प्रतिनिधिमा नेपाली नै छन्।
सन् १९७९ मा खुलेको बैंकले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ। बैंकको होलसेल, रिटेल, अन्तर्राष्ट्रियका साथै ट्रेजरी एण्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ सेवा दिइरहेको वेव साइटमा जनाएको छ।
बैंकको कुवेत, दुवइ, भारतलगायतका देशमा शाखा कार्यालय छ। जापान, चीन, सिंगापुर, हङकङ, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्की, वेलायत, क्यानडा, जर्मनी, वंगलादेशमा प्रतिनिधि कार्यालय छन्।
दि बैंकरबाट बैंकले बेस्ट रिजनल कमर्सियल बैंकको अवार्ड पनि पाएको छ। क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिट्चबाट ए प्लस, मुडिजबाट ए२ रेटिङ पनि पाएको छ।
गभर्नर डा. नेपालले दोहा बैंकसहित अन्य केही बैंक नेपाल आउन छलफलमा रहेको जानकारी दिए। चीन, थाइल्यान्डलगायत केही देशका बैंकहरुलाई नेपाल ल्याउन प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै गभर्नरले भने- यसले हाम्रो बैंकिङलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छ।
कतारको सबैभन्दा ठूलो दोहा बैंक नेपाल आउँदै, अरु कुन कुन बैंक नेपाल आउँदैछन्? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।